FIFIDIANANA:Mirotsaha izay sahy | mandimby maharo
FIFIDIANANA:Mirotsaha izay sahy
Posted on 4 April 2013 4 April 2013 by Mandimby Maharo
Sahy hifanandrina amin’ny mpifidy Hajo Andrianainarivelo amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny 24 jolay 2013. Fanambarana nataony omaly 03 aprily teny Ankaraobato, toerana nahalany azy ho ben-ny tanana in-telo miantoana no nilazany fa raha ny traikefany sy ny lalana nodiaviny tao anatin’ny fitantanan-draharaham-panjakana dia ampy tsara ho entina hitondrana an’i Madagasikara.
Amin’ny anaran’ny antokony, Malagasy Miara Miainga no hirotsahan’ity Praiminisitra lefitra ao antin’ny tetezamita ity. Raha ny voalaza dia efa mahenika an’ny Madagasikara io antokony io ary efa maty paika ny fandaminana ny asany. Amin’ny maha antoko azy dia misy ny tetik’asa ho tanterahiny raha ny olony no mitantana ny fanjakana. Hatreto aloha dia mbola tsy fantatra mazava ny tena vonto atiny na dia efa misy aza ny tranokala http://www.hajo2013.com izay anehony ny momba azy.
Miteraka adihevitra be ity fanambarana nataon’i Hajo ity satria dia mampiseho fisitahana amin’ny antoko Tgv. Anisan’ireo tanan-kavanan’i Andry Rajoelina hatramin’ny nisin’ny tetezamita manko raha ity Praiminisitra lefitra ity. Izao fanambarana 2 andro mialoha ny hanehon’ny Tgv ny ho kandidany amin’ny fifidianana izao nefa dia mampibaribary izay efa nanindry mandry mafy ny mpanara-baovao politika hatrizay fa misy tsy fifankazahona ao amin’ireo mpiara dia hatrizay ireo. Manampy trotraka izany koa ny fanatrehan’ireo antoko manodidina ny Fat ny lanonana omaly. Ny Avi, Udr-c toa an’i Kaleta izay nanome tosika ity kandida ity omaly.
Fa manana endrika kajikajy politika koa nefa io raha ny fahitana azy. Fanaparitahana vato. Satria tsy hisy ho lany amin’ny fihodinana voalohany eo ny rehetra dia atao izay azahona vato be indrindra na dia 10% ihany aza, amin’ny fihodinana faharoa. Misabaka eo anelanelan’ny kandida Tgv sy ireo mpiaradia aminy, anisan’izany i Hajo na dia ampiseho fisitahana ain’izao. Ka izay iray matanjaka no japin’ny Fat.
Tsy maintsy mijery ny ho avy politikany manko izy raha toa ka te hanana tanjaka politika amin’ny taona 2018 izay voalazany fa hirotsahany. Tsy azo dinganina koa manko ilay fomba fanaovana politika ifampizaran’ny anindrantany sy ny ampovoan-tany ny seza ao ambony ao. Io koa no tsapa fa nahatonga an’i Hajo niala haingana satria fantany fa tsy ho tafavoaka ho kandida ny Tgv izy noho izy iray fiavina amin’ny Fat. Ity farany izay mitetika ny ho Praiminisitra amin’ny Repoblika fahefatyra.
Andrasana noho izany izay ho avoaky ny kaogresy ho tontosain’ity antokon’ny Fat ity manomboka rahapitso 05 aprily..
Tags: fifidianana, hajo, Madagasikara, politique, tgvCategories: politique